ေျမ အတြက္ ေရာင္းရန္
Za Yat Hpyu
ေျမ ေရာင္းရန္ အတြင္း Za Yat Hpyu, Mandalay
Mandalay, Kyaukse, Za Yat Hpyu
Sale: Lks 5,132
ပိုင္ဆိုင္မႈ အိုင္ဒီ: 4321694
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ဆည်မြို့ ဇရပ်ဖြူ ကျေးရွာ တံတားဦးလမ်းဟောင်းဘေး တမုတ်မြောင်းအနီး(၁၂.၈၃)ဧက ဥယျဉ်ခြံမြေ စိမ်းလဲ့မြို င်ခြံ။ စ်န်တလုံးသရက်အပင်၅၀၀ကျော်နှင့်အခြားအပင်များ။ခြံစည်းရိုးခတ်ပြီး။၁၂.၈၃ တစ်ဦးတည်းဥယျဉ်ခြံမြေပေါက်ပြီး။
ကျောက်ဆည်မြို့နှင့် ၁ မိုင်အကွာ
တံတားဦးလေဆိပ်နှင့် ၁၀ မိုင်အကွာ
51,921.17 Sq.M. Land area
Other searches in Za Yat Hpyu
ဤပေရာဂ်က္ကို Kaung Kaung The information contained in this listing formsaproperty advertisement of which dotproperty.com.mm has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty.com.mm cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.